Goobjoogayaasha Machadka IRI oo Ammaanay doorashooyinka Somaliland | Xarshinonline News
Goobjoogayaasha Machadka IRI oo Ammaanay doorashooyinka Somaliland
Hargeysa,(Nnn)- Machadka Daraasaadka iyo Horumarinta Dimuquraadiyada oo magaciisa loo soo gaabiyo IRI, ayaa shaaca ka qaaday in doorashooyinka Somaliland ay si nabadgelyo buuxda ah ku dhaceen, iyada oo aanay dhicin wax dhibaatooyin ahi, isla markaana ay u dhiganto doorashadani heerarka caalamiga ah.
Warbixin uu Machadkan Maraykanka ahi ku baahiyay boggiisa Inter-net-ka ayaa lagu sheegay inay dadweynaha Somaliland si xalaal ah ugu codeeyeen doorashadii afraad ee dimuquraadiyadeed ee dalka ka dhacda. Warbixintoodana waxay u dhignayd sidan: “Boqolaal kun oo qof oo Somalilanders ah ayaa u soo baxay inay codkooda ka dhiibtaan doorashadii afraad, isla markaana inkasta oo doonayaan inay ku gaadhaan aqoonsi caalamiya aan haddana sii sugin sidii ay u dhisi lahaayeen dimuquraadiyadooda socod-baradka ah. Sidaa daraadeed, waa inay beesha caalamku ka abaal-mariyaan horumarka dimuquraadiyadeed iyo tusaalaha ay dalalka kale u tahay Somaliland. Sidii hore loo sheegay, doorashada June 26 si fiican ayay u dhacday; balse maalinta codayntu waa qayb ka mid ah qaybaha balaadhan ee ka dheer geedi-socodka hanaankan, kaasoo isugu jira jewiga ka horeeya doorashada, maamulka ka hor codaynta, maalinta cod-bixinta, iyo tirinta codadka iyo ku-dhawaaqidda natiijooyinka la aqbalayo ee sharciga ah. IRI waxay u soo jeedinayaan xisbiyada siyaasadda iyo dadweynaha reer Somaliland inay sugaan ilaa inta laga soo saarayo natiijooyinka rasmiga ah, ka hor inta aan la soo gunaanadin hanaanka doorashada.
Nabadgelyadu waxay ahayd udub-dhexaadka Somaliland 20-kii sannadood ee la soo dhaafay, waana qoddobka uu Machadka IRI xusuusinayay muwaadiniinta, ururada bulshada, masuuliyiinta doorashada iyo musharrixiinta madaxweynenimo intii ka horaysay codaynta. Iyaga oo codadkooda dhiibanaya Sabtidii doorashada madaxtinimo, ayaa Somalilanders-ku ay muujiyeen jacaylka iyo taageerada ay u hayaan dimuquraadiyadda iyo dhulkooda hooyo. Jewigii doorashada ka hor iyo habkii loo maamulay guud ahaanba waxay ahayd mid xiise leh oo caqligal ka dhigaysa hanaankan. Iyaga oo ololayaashooda ku guda jira si ay u gaadhaan gobollada oo dhan, ayay musharrixiintu aaminsanaayeen inay awoodayeen sidii ay farriimahooda u gaadhsiin lahaayeen dadweynaha iyo warbaahinta madaxabanaanba. IRI way jirtay siday doontaba ha ahaatee, cabashooyin soo gaadhay oo la xidhiidhay isticmaalka xisbiga talada haya ee hantida qaranka, sida taleefishanka dawladu gacanta ku hayso iyo gaadiidka.
Komishanka Doorashooyinka Qaranka Somaliland (NEC) ayaa u qalma abaal-marin fara badan. Samayntii kaadhadhka diiwaangelinta iyo kaadhadhka bedelka ayaa khaasatan ahayd talaabo hore oo loo qaaday hanaanka doorashada. Samayntii iyo farsamooyinkii la adeegsaday maalintii codaynta ayaa sidoo kale si waaagsan u dhacday. Masuuliyiintii goobaha cod-bixinta ayaa hawlahooda u watay si la-yaab lahayd. Waa markii ugu horaysay ee caalamka weligeed ay Machadka IRI goob-joog u ahaadaan dedaal amaan mudan oo farsamaysan oo ay ardayda jaamacado loo tabobaray noqdaan masuuliyiintii doorashada. Sidoo kale, Machadka IRI waxa cajiib ku ahayd joogitaanka goob-joogayaasha metelaya saddexda xisbi ee siday u badnaayeen goobaha codayntu ka dhacaysay. Kanina waa habka ugu faa’iidada badan ee lagu kala daadin karo musuqmaasuqa.
Dalal kale oo badan iyo siyaasiyiinba ayay tahay inay wax ka bartaan tusaalaha Somaliland, balse taasi waa keliya hadii doorashooyinku ay ku dhacaan si joogto ah waqtiyada loogu talogalay. Xubnaha Machadka IRI oo 19-xubnood ka koobnaa waxa hogaaminayay Madaxa Boodhka IRI ee Richard S. Williamson oo hore u ahaan jiray Ambaasadoor Qaramada Midoobay ah iyo Ergeygii Khaaska ee Suudaan; Constance Berry Newman oo ah Kaaliyihii Arrimaha Afrika ee Xoghayaha Arrimaha Dibadda Maraykanka iyo Kaaliyihii Maamulka ee Sanduuqa Horumarinta Caalamiga Maraykanka (USAID) ee Afrika. Weftiga waxay sidoo kale isugu jireen wakiillo ka kala socday dalalka Czech Republic, Kenya, Nigeria, Norway, Sierra Leone, Serbia, Spain iyo United States. Kooxdani waxay goob-joogayaal ka ahaayeen goobihii cod-bixinta iyo tirintii inka badan 70 goobood oo ku kala yaala magaalooyinka Berbera, Borama, Burco iyo Hargeysa.
Xubnaha kale ee weftiga IRI waxay kala ahaayeen:
IRI staff also served as observers and assisted in the mission. IRI staff were led by Lorne W. Craner, IRI President and former Assistant Secretary of State for Democracy Human Rights and Labor; Paul Fagan, IRI’s Regional Director for Africa programs; Scott Pool, Resident Country Director for Kenya and Somaliland; and Lara Petricevic, Somaliland Resident Program Officer.”
← Sababaha ka dambeeya guushii ay somaliland dadkeedu ka soo hooyeen , doorashadii dhacday‏
Ceerigaabo: Ciidamada Qaranka oo xabsiga dhigay hawlwadeeno Komishanka ka tirsan, qorshe ay wateena fashiliyay →